Shanta khalad ee dhallinyara casrigan iyo hantidooda. – dhugasho
maxamedsheekafguun Oktoobar 15, 2017 waxbarasho
Dhallinyarada casrigan, sidi loo baahnaa uma qorsheeyaan hantidooda.
In badan oo dhallinyarada haatan nool ka mid ah, ardaydaba ha ugu badnaadeene, ayaa waxay kaliya ka fikiraan nolasha maantaa uun lagu sugan yahay, iyaga oon kayd iyo kaalmo u sii qorshaysanayn timaaddada ku soo foollan.
3. Dhallinyarada oo adeegsada faanka iyo in ay soo wada bandhigaan waxa ay mulkiyaan, taasi oo saboolnimo ku ridi karta illeen waati horay loo yidhi; “Faanku xooluhuu dhammeeyaa, kibirkuna kartiduu dhammeeyaa”.
4. Raaxaysiga oo aan kugu habboonayn wakhtigan aad firfircoon tahay ayay dhallinyaradu aad ugu dadaallaan, iyaga oo shaqadooda ku baylihiya ku xisaabtanka waxa maalintaa uun gacanta ugu jira.
5. Sidoo kale dhallinyarada casrigan, markay shaqo helaan waxay ku mashquulaan shoobid iyo labbis qaali ah iyo waliba safarro aan muhiimad u lahayn oo ay ku beeldareeyaan lacag miisaan leh. Taasi dhib ma lahaateen, oo Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa; “Lacagtaada waad ku cayaari kartaa, balse shaqadaada laguma cayaaro”.
Si kastaba ha ahaatee, shaqada iyo lacagtuba waa wax isku xidhan oo aan midkoodna lagu cayaarin, balse u baahan qorshe dhaw iyo mid dheerba, si aad dhallinyaroy nolasha halgankeeda ugu maara heshaan, waxaa la inooga baahan yahay in eennan ku kicin waxyaabaha dib-dhacnimada ah.